Samsung Galaxy S8 enweghị bọtịnụ anụ ahụ? | Akụkọ akụrụngwa
Ọtụtụ bụ asịrị ndị anyị na-ahụ taa banyere ọkọlọtọ na-esote nke ụlọ ọrụ South Korea Samsung, Galaxy S8. Ngwaọrụ ọhụrụ a ekwesịrị ịhụ ọkụ na mmemme Barcelona n'afọ ọzọ Mobile World Congress 2017, Nwere ike wepu bọtịnụ anụ ahụ site n'ihu ka ịgaghị enwe bọtịnụ Fọdụ mgbasa ozi na-ekwudị na ị ga-atụfu jaak 3,5mm nke ekweisi ma enwerekwa ndị nhazi ọhụrụ Exynos sitere na Samsung, mana ugbu a, anyị ga-elekwasị anya na ha agaghị etinye bọtịnụ anụ ahụ na ihu n'ihu na ha na-ekwu ga-enwe mkpebi 4K.
Anyị ga-adọ aka na ntị na nke a abụghị ihe ọhụrụ n'etiti ọtụtụ asịrị na-agba ọsọ maka ngwaọrụ Samsung ọzọ, mana o doro anya na ọ ga-abụ mgbanwe dị mkpa na imewe nke otu na karịa ihe niile na ojiji na anyị ga-enweta ya. Iche na ugbu a anyị na bọtịnụ na-emekọrịta maka ọtụtụ ọrụ na ọdụ, mana ọ bụrụ na ọ ga-apụ n'anya n'ụdị kachasị ọcha nke ọhụrụ Xiaomi 5s ma ọ bụ ọbụlagodi otu o si yie na Apple na-ezubekwa iji iPhone ọzọ ya, ha ga-eme nwere iji sistemụ nke na-enye anyị nzaghachi site na imetụ ya aka.
Iwepu bọtịnụ anụ ahụ na-enye anyị uru na ọghọm taa. Ọ ka mma maka nsogbu na-adịgide adịgide na mbibi enwere ike ibute iji ya, mana ọ ka njọ 'ịchọta ebe' ebe bọtịnụ dị ma ọ bụ naanị mgbe anyị wepụtara ya n'akpa ka ị ghara ịpị na ebe ahụ ebe ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ga-eme bụrụ wdg. N'ezie nke a bụ asịrị na anyị enweghị ike ikwu na ọ bụ ihe akwadoro, mana O yiri ka ụzọ nke bọtịnụ anụ ahụ na-abịa na njedebe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Samsung Galaxy S8 enweghị bọtịnụ anụ ahụ?
O nwere ike ịbụ na ọ ga-enwe nrịgo iji dochie bọtịnụ ahụ na mkpịsị aka anyị, mana ọnwụ Jack dị ka ọ karịrị m oke, enweghịkwa m ihe kpatara eji gbanwee ihe dịka Samsung Akara Mbinye aka: Button Home gị. Ndị maara: 4K ga-achọ nnukwu ike na batrị ahụ ga-agba ọsụsọ ma ọ bụ gbawaa dị ka Rịba ama 7?
Zaghachi Paul Sandoval
Ndị nyocha na-ele iPhone 7 anya ma buru amụma na Samsung ga-edegharị oge a.
Ọ ga-akwụrịrị nke ọma iji nye nnukwu ụdị "Chinese" na - adịghị mma (Cheta na 7 gosipụtara na enweghị mgbagha)
Ọ dị mma ikwu maka Pixel ma ọ bụ ndị ọzọ na-achọ ịmegharị ihe na ntanetị, ọ bụghị na nke ndị ọzọ.
Dika Apple puru isi ya nke ukwuu maka imeputa iPhone ... E si na Meizu depụtaghachi ya na HTC ka Apple abụghị ihe kachasị mma ikwu
X-Conect, magnetik na eluigwe na ala USB cable na-ana ihe niile